Miorina Amin’ny Fanantenana ny Zotra Mankany Amin’ny Zon’ireo vehivavy Afghana, Na Dia Mampidi-doza Aza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Avrily 2016 2:05 GMT
Vehivavy ao amin'ny Miaramila Nasionaly Afghana. Sary an'ny Hery an'habakabaka Amerikana/Mpiandraikitra Sgt. Laura R. McFarlane/Navoaka teo ambanin'ny Creative commons.
Ho an'ireo vehivavy Afghana, nisolo ho làlam-baovao misokatra ny faneriterena sy herisetra mandeha ho azy nandritra ny andron'ny Talibàna, saingy koa eo ny tahotra sy ny tsy fandriampahalemana taorian'ny fananiham-bohitra notarihan'ny Amerikana tao amin'ny fireneny.
Ankehitriny, sarotra noho ny hatrizay ny pôlitikan'ny vavy sy ny lahy any Afganistana, noho ny fandresena amin'ireo faritra sasany izay raisin'ny hafa ho fihemorana.
Hatramin'ny fanombohan'ity taona ity, notendrena ho isan'ireo hahazo ny Mari-pankasitrahana ho an'ny Fandriampahalemana ny Ekipam-pirenen'ny Vehivavy Afghana Mpivoy Bisikileta, raha nibata ny medaly Volamena kosa i Sumaya Ghulami tamin'ny taekwondo nandritra ireo lalaon'Azia Atsimo notanterahina tany Guwahati sy Shillong, India, izay fahalavorarina tsy hita noeritreretina akory nandritra ny vaninandro Talibàna.
Saingy anisan'ireo niharam-boina ny vehivavy tamin'ny fikomiana mahery vaika nataon'ny Talibàna sy ny fitomboan'ny heloka bevava izay na ny governemanta marefo tao Kabul na ny miaramila Amerikana efa niha-nihena teo an-toerana aza dia tsy nahavita namehy izany.
Nabaribarin'ny fiavian'ny media sosialy ireo ohatranà herisetra sasany goavana indrindra natao tamin'ny vehivavy vao haingana izay.
Ny volana Novambra lasa teo, tanatinà tanàna kely eo ambany fifehezan'ny Talibàna, ao amin'ny faritanin'i Ghor, Afganistana Afovoany, dia notoraham-bato mandra-pahafatiny noho ny fanitsakitsahany vady ny vehivavy iray 19 taona antsoina hoe Rokhshana.
Nampahatsiahy ny famonoana feno herisetra an'i Farkhunda, izay notaterin'i FaribaNawa, ilay famonoana tamin'ny tora-bato an'i Rokhshana
Ara-teknika ny natioran'ilay fanitsakitsahana — fandosirana mariazy an-terisetra natao taminy — ary niteraka rikoriko niparitaka nanerana ireo tambajotra an-dàlam-pitomboana anaty aterineton'i Afganistana, ilay lahatsary toa nalaina tamin'ny alalan'ny finday, mirakitra ilay fitoraham-bato nalaza be tao anaty Aterineto, .
Lasa iray amin'ireo tena maherifo amin'ny fampanjakàna ny rariny amin'ny raharaha Rokhshana ilay governoran'ny faritanin'i Ghor teo aloha, Seema Joyenda, izay hany vehivavy faharoa governora notendrena tany Afganistana.
Saingy nesorina teo amin'io toerany io ny tenan'i Joyenda taorian'ny nahombiazan'ireo mpitahiry fomban-drazana — na teo aza ny fanoherana — ny hetsi-panentanany ny amin'ny hanaisorana azy amin'ny toerany.
Mbola tsy nisy ohatra ity; Manao hetsi-panoherana entina hanohanana vehivavy Governora any amin'ny faritany mitokan'i Ghor ireo lehilahy Afghana. Manome fanantenana ahy izany!
Niseho volana vitsy monja taorianà loza iray hafa nahatsiravina izay nahasarika ny sain'izao tontolo izao ny fitoraham-bato an'i Rokhshana, raha toa ka nisy vehivavy tsy salama saina iray, Farkhunda, nodarohana mandra-pahafatiny sy nodorana noho ny filazàna azy ho nandoro ny Korano.
Niseho tamin'ny faran'ny taona teo ny iray amin'ireo loza tena mahatsiravina mikasika ny herisetra ara-pananahana taorian'ny vanim-potoana 2001.
Nitatitra ny gazety Pajhwok Afghan fa lehilahy iraika ambiny folo, tafiditra anatin'izany ny polisy efa-dahy, nanao fanolanana faobe zazavavy iray sivy taona, tao amin'ny avaratra andrefan'ny firenena, izay ifandrafian'ny governemanta sy ny Talibàna ny fitantanana azy.
Ny lohataonan'ireo vehivavy Afghana
Kanefa tsy ireo vaovao rehetra dia ratsy avokoa.
Tamin'ity volana ity, niverina tany Afganistana i Sumaya Ghulami, ary notsenaina sahala amin'ny maherifo taorian'ny nahazoany ny medaly volamena tamin'ny taekwondo nandritra ireo Lalaon'i Azia Atsimo 2016. Noharabain'ny Filoha Ghani imasom-bahoaka izy ary noderaina maneran-tany tamin'ny filazan-gazety.
(3/3) Notoloran'ny Filoha mari-pankasitrahana i Sumaya Ghulami sy ireo atleta telo hafa.
Vao haingana izay dia nanambara tetikasa fanamboarana anjerimanontolo voalohany eo amin'ny firenena natokana ho an'ny vehivavy, izay vatsian'ny governemanta Tiorka vola, ny vadin'i Ghani, Rula Ghani, fiovàna hita ho fanalahidy amin'ny fanomezana fahafahana ireo vehivavy hahazo fianarana amin'ny ambaratonga ambony.
Nandritra izay fotoana izay, maherin'ny zato ireo solombavambahoaka Italiana nanome soso-kevitra ny hanome ny Mari-pankasitrahana ho an'ny Fandriampahalemana ho an'ny ekipan'ny vehivavy Afghana mpivoy bisikileta, tamin'ny voalohan'ity volana ity. Nampangitakitaka ny sampana Afganistana tao amin'ny Twitter izany fanendrena izany.
Voatendry hahazo ny mari-pankasitrahana ho an'ny fandriampahalemana 2016 ny ekipan'ny vehivavy Afghana mpivoy bisikileta
Ny hetsika toa izao dia maneho ny fivoaran'ny fahitàna ireo vehivavy eo amin'ny fiainan'ny daholobe. Ao amin'ny parlemanta, mitàna toerana 28% ireo vehivavy — salan'isa bebe kokoa raha oharina amin'ny ao amin'ny Kongresin'i Etazonia.
Kanefa, tsy mbola nisy vehivavy nitarika ny parlemanta, maneho izany fa afaka mivelatra ny fisian'ny vehivavy ao amin'ny politika anatiny na tsy voatery midika ho fananana fahefàna mivaingana aza izany.
Ohatra iray mazava tsara izao ny fanandraman'i Ghani hampiditra vehivavy mpitsara tao amin'ny filankevitry ny fitsarana avo ao amin'ny firenena, izay haingana teo dia nosakanan'ny parlemanta hanjakan'ireo mpitahiry fomban-drazana.
Làlana lavitra tsy maintsy hajaina
Miovaova araka izany ny toeran'ireo vehivavy eo amin'ny fiarahamonina Afghana, arakaraka ny vondrom-piarahamonina tsirairay avy.
Ireo vehivavy Hazara izao dia tena nahita fiovàna haingana tamin'ny fiainan'izy ireo, mety hoe noho ny taha ambonin'ireo vehivavy nahazo fampianarana ambony kokoa raha oharina amin'ireo vondrom-poko hafa amin'ny vanimpotoana taorian'ny Talibàna.
Anisan'ireo vehivavy tena manana ny lanjany tokoa ao Afganistana i Sima Samar, Filohan'ny Vaomieran'ny Zon'olombelona Afghana, ary i Habiba Sarabi, ilay vehivavy governora voalohany indrindra ao Afganistana, any amin'ny faritr'i Bamiyan, samy avy any amin'ny foko Hazara izy roa ireo.
Laila Haidari, Hazara iray hafa koa, dia vehivavy mpirotsaka an-tsitrapo ara-tsosialy, izay nanorina ny Mother Camp (Tobin'ny Reny) izay misahana ireo lehilahy mpiankin-doha amin'ny zava-mahadomelina.
Saingy mbola voavakavaka amin'ny lalàna Afghana ny vehivavy manerana ireo vondrona ao amin'ny firenena, izay mbola manokana ny zo hisara-panambadiana ho an'ny lehilahy samirery, raha toa koa ka mbola eo ambany fitantanan'ny filoham-pianakaviana ireo raharaham-pianakaviana amin'ny ankapobeny.
Ary ny mampanahy, miha-mahazo vahana manerana ny firenena ny Talibàna, na dia misaratsaraka aza ny hetsika ataony, raha ireo mpitondra fivavahana mpitahiry fomban-drazana kosa dia tsy mitsahatra ny milaza ireo zon'ireo vehivavy ho novoizin'ny toetsaina Tandrefana.
Anatinà tontolo miovaova toy izany, voahidy anaty zavatra mifanohitra ireo vehivavy: afaka mankafy sehatra midadasika kokoa ahafahany mandray anjara izy ireo noho izay nataony 15 taona lasa izay, kanefa ihany koa dia azo lazaina ho fandri-baratra manoloana ny fihetsik'ireo mpitahiry ny fomban-drazana izay tsy azo iodivirana.
06 Febroary 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana